Ntinye aka na Tlọikwuu nke USB Car Insurgents na Sapanca | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara54 SakaryaNtinye aka ndị uwe ojii na entlọikwuu nke USB Car Insurgents na Sapanca
09 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, TELPHER 0
ndị uwe ojii etinye aka n’ili nke ihe nkwụchi nke ụgbọ ala USB
Ntinye aka ndị uwe ojii na entlọikwuu nke USB Car Insurgents na Sapanca; Mpaghara Sapanca nke Sakarya, ndị mpaghara ahụ guzobere nguzobe ụgbọ ala USB, ebe ha na-aga n'ihu n'ọrụ ha, ndị uwe ojii na ndị isi ọchịchị welitere ụlọikwuu nke ndị na-eme ihe nkiri jiri ụtụtụ. Ọ bụ ezie na ndị uwe ojii mere ọtụtụ nchekwa nchebe, ụlọikwuu ahụ kwagara ebe ọzọ. Ihere adighi eme gi, gi bia n’oge a, ”ndi ngagharị iwe zara, nọdụ ya na nwa oge.
Obodo Sapanca mere nkwekọrịta maka ụgbọ ala USB iji guzobe n'etiti ụlọ ọrụ nkwekọrịta na Kırkpınar na Mahmudiye Hill. Ndị na-emegide ụgbọ ala USB, nke e mere atụmatụ iwulite na ogige ahụ na mpaghara ebe ala ọma jijiji na-egbu site na igbutu osisi puku atọ na mpaghara ahụ, malitere ihe ahụ. Ndi mmadu doworo ulo-ikw in n’ebe a na-ewu ihe eji eme ihe, uzo kwesiri ime ebe ozo. N’isi ụtụtụ taa, ndị uwe ojii na ndị isi ọchịchị batara mpaghara ahụ. Ọ bụ ezie na ndị uwe ojii mere ọtụtụ nchekwa nchebe, ụlọikwuu ahụ kwagara ebe ọzọ.
Ndị na-eme ngagharị iwe meghachiri ụlọikwuu ahụ na ngwongwo ya ebe ọzọ. Ndị otu ahụ mere ihe site na ịnọdụ ala oche ndị ha jere obere oge. Mgbe a na-ewepụ ụlọikwuu ahụ, ndị otu ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na mpaghara.
Ihe oru ngo a, nke ndi Sapanca siri kpachie onu na afo gara aga, ga-amalite na Kırkpınar Neighborhood ma kwusi na Mahmudiye İncebel ebe emere ka onodu 1500 di. Ihe oru ngo a, nke Bursa Teleferik A.Ş ga-ewulite na nbudata nyefe-oru nke 25 n’azu, ga-efu ihe dika nde gin nde 80.
Mpaghara a họọrọ maka ọrụ ụgbọ ala USB na K cablerkpınar bụ Mpaghara Mgbakọ Ọdachi, yana ogige ụmụ na ebe ntụrụndụ nke ndị obodo ahụ ji eme ihe. Ọ bụkwa ala enyerela steeti ahụ n’oge gara aga, ma ọ bụrụ na ndị mpaghara ahụ ejighị ya maka nzube ndị ọzọ.
N'ime akụkụ nke puku oghere 17 nke eriri eriri ahụ, ihe dị ka 5 puku osisi ga-ebipụ na 80 ruo 3, ma ọ bụrụ na arụ ọrụ ropeway ebe a, ga-ebelata mpaghara ahịhịa ndụ na ihe ize ndụ nke mbuze, idei mmiri na ide mmiri ga-aba ụba. " (T24)
Ogbugbu TCDD ka ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị gafechara
Nzọụkwụ akụkọ na Old Factory Repair Factory na Malatya